Were a nseta ihuenyo on Android Devices na One Click
> Resource> Android> Were a nseta ihuenyo on Android Devices na One Click
M mkpa ụfọdụ oyiyi nke data, na nanị ụzọ m nwere ike chepụta esi na bụ na-ese foto, nke anya crummy na nwere manụ reflections buut. Enwere ụzọ dị nnọọ na a mfe screenshot on android ngwaọrụ?
N'ezie, ọ bụghị otú ahụ siri ike na-screenshot on Android si PC, mgbe ị na-atụgharị ihe Android njikwa maka enyemaka. Ọ bụ Wondershare MobileGo for Android (Windows), ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Nke a omume ọma e Android njikwa na-enye gị ohere ime ihe ọ bụla screenshot na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na otu Pịa. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịzọpụta meziri na kọmputa ma ọ bụ igosi ha n'etiti ndị enyi gị na ndị òtù ezinụlọ.
Download a usoro na-screenshot si Android.
Rịba ama: Na akụkụ n'okpuru, na-ahapụ 'na-agbalị Wondershare MobileGo for Android ọnụ. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwere ike na-screenshot na yiri nzọụkwụ na Mac version - Wondersahre MobileGo for Android Pro (Mac).
Were a screenshot on Android ngwaọrụ mfe
Ozugbo ị malite a Android faili na kọmputa, a window ga-n'anya gị.
Cheta na: Nke a Android njikwa aha ya bụ Wondershare MobileGo for Android bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara ọtụtụ puku Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-agba ọsọ Android 2.0 na mgbe e mesịrị. Biko ego ọzọ zuru ezu banyere akwado Android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ Android ngwaọrụ na kọmputa
N'ihi na Windows ọrụ, i nwere ike iji Android eriri USB ma ọ Wi-Fi ijikọ Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa. Dị ka Mac ọrụ, ị pụrụ ime ka njikọ site na iji eriri USB. Mgbe ahụrụ, android ngwaọrụ a ga-emere ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Were screenshots on Android
Dị ka ị na-ahụ, "nseta ihuenyo" button e gosiri n'okpuru Android ekwentị ke akpan window. Tupu ewere a screenshot na gam akporo, ị kwesịrị ị na-akpa-eme n'aka na ihuenyo Android ngwaọrụ bụ onye ị na-achọ ime screenshot.
Mgbe ahụ, pịa "nseta ihuenyo". Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, chọta a ọnọdụ ịzọpụta screenshot. Site ndabara, nseta ihuenyo ga-azọpụta PNG usoro.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ime dị iche iche screenshots, ị dị nnọọ mkpa igosipụta gị chọrọ ihuenyo na Android ngwaọrụ. Mgbe ahụ, pịa bọtịnụ na-esote "nseta ihuenyo" ka ọhụrụ na ihuenyo ke akpan window. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike pịa "nseta ihuenyo" na-agbalị na-ewere screenshots na gam akporo.
Lee, nke ahụ bụ ihe niile banyere otú na-screenshot on Android ekwentị na mbadamba. Nanị otu click na ị na-gị chọrọ screenshots. Ugbu a, na-aga na-egosi kwụsịrị screenshots na gị ezinụlọ na ndị enyi.
Download MobileGo for Android na-agbalị otú e si lee screenshot na gam akporo.
Olee otú iwepụ Android ngwa site PC